> Resource > iPad > 2 Methods si ay u gudbiyaan Music hawada iPad in Computer ah
Laga keeno badan oo music aad hawada iPad, laakiin hadda xusuusta aad hawada iPad waxaa ay kor u dhow isticmaalo? Waxaa laga yaabaa in aad rabtid in aad loo wareejiyo computer ka hor tirtirka, si aad u rakibi karo barnaamijyadooda, kulan play, daawato videos iyo ka badan si habsami aad hawada iPad, iyo wadaagaan music laga dhoofiyey qoysaska iyo saaxiibada aad kombiyuutarka ka mid ah. Waa effortless si ay u gudbiyaan music iibsaday hawada iPad in kombiyuutarka. Si kastaba ha ahaatee, marka ay timaado music goolka ka dukaamada kale music ama dooxay ka CD-yada, wax ay adag tahay in loo fuliyo. Ha welwelin. Maqaalkani waxa aad bixisaa 3 hab oo kaa caawinaya in aad wareejiso iibsaday iyo music iibsaday oo aan si computer.
Habka 1. Transfer iibsaday music hawada iPad in Lugood
Habka 2. Nuqul ka iibsaday oo aan ahayn iibsaday music hawada iPad in computer
Ma noqon kartaa fudud si ay u gudbiyaan music ka iibsaday hawada iPad in Lugood Library. Uma baahnid inaad wax qalab xisbiga 3aad. Halkii, kaliya aad u baahan tahay in aad awood u computer iyo samayn iibsiga. Hoos waxaa ku qoran talaabooyinka buuxa.
Tallaabada 1. Open Lugood kombiyuutarka.
Tallaabada 2. Click Store iyo dooran fasaxayaa Tani Computer ... ka menu hoos-hoos.
Tallaabada 3. Ku qor ID Apple iyo password in aad u isticmaashay in ay iibsadaan muusikada.
Tallaabada 4. in kombiyuutarka Connect aad hawada iPad.
Tallaabada 5. Tag AALADAHA iyo xaq guji si aad hawada iPad. In menu hoos-hoos, guji Iibsasho Transfer .
Tallaabada 6. Sug inta uu suuqa kala iibsiga uu yahay mid dhameystiran.
Haddii aad soo iibsatay music la badan IDs Apple, aad leedahay si aad awood u computer ah u ah dhamaan. Si kastaba ha ahaatee, aad loo ogol yahay in la oggolaado ilaa 5 kombiyuutarada la mid ID Apple. Taasi macnaheedu waa in aad u leeyihiin in ay raadiyaan habab kale markii aad hore u oggolaaday 5 kombiyuutarada.
Sida kor ku xusan ee ku xusan, music dooxay ka CD ama lagala soo bixi dukaamada kale music (Lugood laga saaray) ma la koobiyeyn karaa in Lugood Library adigoo gujinaya Iibsasho Transfer. Sidaas darteed, waxaan ku talinaynaa heer sare ah qalab Xisbiga 3-aad u. Waa ay TunesGo Wondershare (Win) ama TunesGo Wondershare (Mac) . Waxay awood u aad si ay u gudbiyaan music aan iibsaday iyo sidoo kale kuwa u iibsaday inay computer ah Windows iyo Mac (Mavericks, Mac OS X 10.9) ee neecaw.
In ay qayb ka socda ee qodobkan, waxaana idin tusin doonaa tutorial ah inuu kaa caawiyo inaad music hawada iPad wareejiyo computer la version Windows - Mobile Wondershare ku Tag ee macruufka. Users Mac qaadan kartaa tutorial iyo sidoo. Iska akhriso on.
Tallaabada 1. Isku hawada iPad in ay computer ka iyo ordi qalab
Connect hawada iPad ay u computer la ah USB cable Apple. Orod qalab iyo aad arki doonaa adiga info iPad Air soo bandhigay in uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Transfer hawada iPad music in computer
Habka ugu fudud ee song hawada iPad wareejiyo PC waxaa gujinaya Copy iDevice in Lugood iyo dhoofinta Music si gal , badhamada ku yaal khadka hoose.
Tag column ka tagay halkaas oo waxyaabaha aad hawada iPad waxaa loo kala saaraa oo guji Media . On guddi saxda ah, guji Music inuu soo galo suuqa kala music ah. Hubi heeso aad u socoto in aad nuqulka.
Music 1.Copy hawada iPad in computer iyo badbaadin meel gal ah: Guji si dhoofinta iyo ka heli gal kombiyuutarka u badbaadin.
2. Transfer heeso ka soo hawada iPad in Lugood Library: Riix saddexagalka hoos dhoofinta inay doortaan iyo dhoofinta in Lugood Library ka mid ah liiska hoos-hoos. Ama guji Smart dhoofinta in Lugood in kaliya lagu wareejiyo gabayadii aan ahayn in Lugood Library, taas oo aad halaajiya oo ka kala iibsiga isla songs si joogta ah.
Iyadoo version Windows ah, xitaa ay awood u leeyihiin in ay si toos ah nuqul playlists in folder ama Lugood Library. Tag playlist in ay galaan Window playlist ah. Riix dhoofinta in ay u gudbiyaan ah playlists doortay inay computer ama guji saddexagalka yar hoos dhoofinta si dooro dhoofinta in Lugood Library inuu u dhaqaaqo playlists ah.